"IGraamophone yeGold 2015". ifoto
Ukuphela konyaka, ngesithethe, kubandakanya ukuququzelelwa okuthile, kwaye ke, ukuhanjiswa kweebhaso. Esinye sezibhengezo zomculo zasekhaya zaseburhulumenteni "I-Gramophone yegolide" yayibanjwe ngoMgqibelo wokugqibela kwi "Olimpiki".
Kulo nyaka umthendeleko waba yintlokontsi - i-20, kule nxu lumene, abaququzeleli balungiselela imbonakalo yangempela yeeyure ezininzi. Kwiiyure ezithandathu, uDmitry Nagiyev no-Ivan Urgant baqhuba inkqubo yokunikezela.
Kwisiqendu, abaculi abadumileyo bawenza iirhafu zabo. Ekubeni kwakumkhosi wejubile weGreen Gramophone, iingoma zazizwakala ngexesha lonke. Ngoko, uDmitry Malikov wenza i-hit "Uwe, unjalo", uAlsu - "ngamanye amaxesha", uTatiana Bulanova - "Sula ukukhanya kwam." Umthendeleko wangempela kunye noFilipu Kirkorov, owamkela ngoMgqibelo i-statuette ye-20:
U-Ani Lorak wamangalisa wonke umntu ophethe isambatho sakhe esingavamile, esasinxweme kunye namakhulu emininzi ebomvu. Nangona kunjalo, ingubo leyo yabangela umculi kunye nokunye ukuphazamiseka - ingubo yayinamandla kangangokuthi abadlali bancedisa uCaroline ukuba amthwale.
U-Natalia Ionova wakhetha ukuhlwa ngengubo epholileyo kunye nomthunzi we-puddro-pink:
Umculi MakSim wayembethe ingubo kunye neentyantyambo zeflegi yaseRussia ekuqoqweni kweBell Potemkin. Kwiveki yamaFebhu yakutshanje, loo ngubo yayimelwe yintombi endala yeTatiana Navka.
UJasmine, omele umntwana wesithathu, wakhetha ingubo ebomvu ebomvu waseYiputa. Ukuze ngandlela-thile idibanise imibono esuka kumfanekiso oshintshileyo, umculi wayenxibe ibhattshi yegolide phezulu.
Zonke iinkwenkwezi ezavela kwi-Olympic Stadium zafumana i-Golden Gramophones ngaloo mini. Abaculi abadumileyo abanomdla abafakeli beefoto, ngoko sinethuba elihle lokufumana umoya weeholide kaMgqibelo:
U-Natalia Ionova wamgculela iingubo ze-robot
5 abantwana beenkwenkwezi zaseRashiya abangenakuphinda baphinde baphumelele umzali, ifoto
Ukunyamekelwa kwemveliso yobomvu
Isonka esheshayo ngeeshizi
Indlela yokunciphisa umzimba ngaphandle kweengxaki zempilo
I-sauce ye-Orange kunye nembewu yesardadi kunye neesame
Indoda - unyana ka-mamma
Iibisiki ze-Cheese kunye ne-basil
IiVithamini kubantwana abangaphantsi konyaka omnye